Tangalle " Journey-Assist - Sri Lanka. Atsimo. Tora-pasika. zavatra hita
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Tangalle
Tangalle - paradisa any atsimon'i Sri Lanka
9 martsa, 2020
5 ny fanehoan-kevitra
eo an-dalam-panamboarana ny pejy
Tangalle dia tanàna any amin'ny morontsiraka atsimon'i Sri Lanka. Ny halaviran'ny Colombo dia 195 km. Ny helodrano lehibe indrindra amin'ny faritanin'i Tangalle dia manana seranana fitaterana sambon-jono. Ny sisin'ny morontsiraka rehetra dia feno indiana bara kely kokoa, izay nopetahany felatanana voanio. Ny isan'ny tanàna dia manodidina ny 11. Ny tanàna akaiky an'i Dikwella dia heverina ho ambanivohitr'i Tangalle.
Tangalle dia iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny tsara indrindra any atsimon'i Sri Lanka
Tangalle dia iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny tsara indrindra any atsimon'i Sri Lanka. Ity tanàna ity dia malaza amin'ny fisakafoanana ao aminy. Ny chef eto dia mahay mahandro lovia matsiro tsy mampino avy amin'ny trondro sy hazan-dranomasina mafana indrindra. Misy haran-dranomasina eo akaiky eo, ka mahatonga an'i Tangalle ho toerana mety indrindra amin'ny snorkeling sy ny antsitrika. Ny rano tena mazava dia miteraka fepetra amin'ny snorkeling sy ny antsitrika. Mandritra izany fotoana izany dia afaka milomano manakaiky ny morontsiraka sy ny hotely ianao. Ao Tangalle dia afaka mahita hotely misy sokajy rehetra ianao. Betsaka koa ny trano fandraisam-bahiny eto.
Na dia eo aza ny hatsarany, ny lazany ary ny fotodrafitrasa voavoatra, Tangalle dia tsy feno olona mpanao vakansy. Tonga efitra tanteraka ny torapasika eto. Indraindray toa tsy misy olon-kafa amoron-dranomasina fa ianao. Na izany aza, amin'ny fandroana mahazatra, ny morontsiraka Tangalle dia tsy mety noho ny onja avo tsy miova. Angamba io no toerana tsy dia mirazoto loatra amin'ny morontsiraka atsimo Sri Lanka. Saingy ny morontsiraka Tangalle dia sahaza ho an'ny rehetra izay te hankafy ny fijerin'ny ranomasina fotsiny ary miala sasatra.
Ny fotodrafitrasa amin'ity tanàna ity dia novolavolaina tsara. Misy habaka ATM sy kafe amin'ny Internet, marobe ny sampana any amin'ny banky izay ny fifanakalozana fifanakalozana. Amin'izay fotoana izay dia tsy misy mpanakalo fifanakalozana tsy miankina (izay mazàna manana fifanakalozana fifanakalozana tsara kokoa noho ny banky). Tangalle dia tsy mety amin'ny fivarotana feno tanteraka, na izany aza, ny fividianana ny zavatra tena ilaina, ny sakafo ary ny fanomezana tsotra dia tsy ho olana eto mihitsy. Manana toeram-pivarotana lehibe ny tanàna, fivarotana lehibe sy tsena maromaro.
Na dia maro aza ny hotely ao Tangalle, tsy misy faritra fizahan-tany misaraka eto amintsika. Tsy be dia be ny trano fisakafoanana sy ny kafe ary indrindra miasa amin'ny hotely. Misy ny toeram-pisakafoanana misy serivisy izay tsy mifandray amin'ny hotely ary natao ho an'ny mponina eo an-toerana fa ny kalitaon'ny sakafo sy ny haavon'ny serivisy dia mazàna ary ambany (na dia ny vidiny ihany koa aza).
Ny biraon'ny masoivoho fitetezana dia vitsy dia vitsy. Noho izany, mba handraisana fitsangatsanganana dia voatery hifandray amin'ireo mpiasa ao amin'ny hotely ny mpizahatany. Izy ireo dia afaka manome mpamily tuk-tuk izay mahay farafaharatsiny anglisy ary mahafantatra ny fomba hahazoana any amin'ny toerana mahaliana isan-karazany.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny Tangalle
Ny lalamby dia amboarina hatrany, ary anio ianao dia afaka mankany Tangalle amin'ny lamasinina. Mandeha manaraka ny morontsiraka atsimo andrefana mandritra ny 5-6 ora mankany amin'ny Station Belliata. Ny saran-dalan'ny Colombo Belliata amin'ny sarety kilasy faharoa dia mitentina 350 rupe. Afaka mahazo avy any Belliata mankany Tangalle ianao amin'ny 20-30 minitra amin'ny fiara fitateram-bahoaka, izay tsy hitarina intsony. Ny vidin'ny olona iray dia manodidina ny 40 rupee.
Avy amin'ny tanàna lehibe indrindra any Sri Lanka, afaka mandeha any ianao amin'ny bus. Avy any Colombo, mandeha eto mandritra ny 6 ora ny bus, ny vidiny dia 200 na 410 rupees (miankina amin'ny karazana bus - misy na tsy misy aircon). Avy any Galle - adiny 2, ny saran-dàlana dia 85 na 200 ropia. Avy any Matara dia maharitra 1,5 ora ny dia ary 47 ropia ny vidiny. Avy any Hambantota dia tsy maharitra adiny 1 fotsiny ny bus ary mitentina 89 ropia. Avy any Tissamaharama - adiny 3, saran-dalana - 110 ropia.
Torapasika any Tangalle
Manana moron-dranomasina maromaro ity tanàna ity. Amin'ny faritra avaratra - Medilla sy Medaketia, any andrefana - Pallikaduwa sy Goyambokka. Ny tena manintona indrindra dia i Medilla. Rakotra fasika malefaka sy akorandriaka misy habe sy loko isan-karazany izy io. Betsaka ny haran-dranomasina sy vatobe ao anaty rano, noho izany dia mila mitandrina ianao. Ny Medaketia no azo antoka indrindra amin'ny fandroana. Mirefy 3 km ity morontsiraka ity. Ny ankamaroan'ny hotely Tangalle tsy lafo dia miorina amin'ny faritaniny.
Ny morontsiraka Goyambokka dia mivelatra 2 km andrefan'ny afovoan-tanàna, ary Pallikaduwa dia somary andrefany. Ny trano fandraisam-bahiny amin'ireo morontsiraka ireo dia lafo kokoa noho ny ao Medilla sy Medaketia.
Ao afovoan-tanànan'i Tangalle, tsy misy torapasika, ny morontsiraka manontolo eto no sakany amoron-dranomasina.
Aiza no hahitako ny masoandro any Tangalle?
Ao atsinanan'i Tangalle, akaikin'ny Turtle Point ao amin'ny Pantai Rekawa dia afaka mahita masoandro milentika ianao. Amin'ity horonantsary etsy ambony ity dia avy any fotsiny.
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https://goo.gl/maps/s23WravaVGgQGnsVA
Fahatahorana ao Tangalle
Ny tena manintona indrindra amin'ity tanàna ity dia tokony hoheverina ny fomba fijery ranomasina sy ny torapasika lava miaraka amin'ny rano mazava. Betsaka ny haran-dranomasina tsara tarehy akaikin'ny morontsiraka.
Raha ny momba ny tranokala ara-tantara sy ny kolontsaina dia vitsy anisa ao Tangalle. Anisan'izy ireo, ny kompleks tempolista bodista malaza indrindra ao Mulkirigala, izay ao anaty zohy. Tamin'ny taonjato faha-3 naorina izy io. BC. f. eo ambony vatolampy. Any amin'ny haavon'ny 200 m ary misy lava-bato lava 7 sy velarana 5. Ao amin'ireo zohy tsirairay dia misy tsangambato Buddha izay aseho amin'ny fiatoana. Lavina miloko marevaka dia noloko eo amin'ny rindrina. Ny rakitry ny fidirana amin'ny tranoben'ny tempoly ho an'ny olona tsirairay dia 500 rupe.
Fitoerana tempolista bodista iray hafa antsoina koa hoe Vevurukannala. Tsy ao an-tanàna mihitsy no misy azy io, fa 20 minitra eo ho eo andrefan'ny fiara Tangalle. Vevurukannala dia manarona faritra maintso maitso 8 hekitara. Any afovoany amin'ity valan-javaboary ity dia sarivongan'i Buddha. Eo koa ny firafitry ny tempoly sy ny galeriany, izay misy ny fanangonana ny zavakanto Sri Lankan.
Ny Kalametia Nature Reserve dia miorina 25 km atsinanan'ny Tangalle, mirefy 2 hektara. Karazam-borona maro no monina eto amin'ny tontolo voajanahary misy azy, ary ny sasany amin'izy ireo dia tandindomin-doza. Anisan'ireny ny akoho ala any Ceylon, izay tsy mitongilana amin'i Sri Lanka ary iray amin'ireo tandindom-pirenena eto amin'ity firenena ity.
Ao an-tanàna, dia afaka mahita trano tranainy amin'ny fomba nentim-paharazana holandey. Ity, indrindra indrindra, ny kianja, trano fandraisam-bahiny tranainy indrindra any Sri Lanka (namboarina tamin'ny 1774) ary ny fiarovana, izay ampiasaina ankehitriny am-ponja ankehitriny.
Hotely ao Tangalle. zavatra ilaina
Misy be ny hotely amin'ity tanàna ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia mifantoka amin'ny faritra mangingina eo akaikin'ny morontsiraka. Tsy misy resabe sy tabataba toy izany any afovoan'i Tangalle ary manaraka ny làlan'ny làlan'ny làlana Tangalle. Ny vidiny farany ambany ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny ho an'ny roa dia mety ho $ 15. Ho saram-pidiny ambany kokoa dia afaka mipetraka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ianao na manofa trano ao an-tranon'ny iray amin'ireo mponina eo an-toerana (ny vidiny dia farafahakeliny 1 rupees, raha toa kosa ny fividianana entana). Ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bola tetibola dia hita amoron-dranomasina Medaketia.
Inona no atao any Tangalle
Ny tena mampiavaka an'i Tangalle dia ny akaiky an'io fampiasa amin'ny natiora io. Noho io antony io, ny hetsika lehibe atao eto dia ny fitsidihana ny fitehirizam-bokin'ny natiora Kalametia, mijery sokatra eny amoron-dranomasina sy sambo.
Kalametia Bird Sanctuary
Kalametia dia eo atsinanan'ny Tangalle. Rakotra ala honko ny faritry ny tahiry. Ny isan'ireo karazam-borona monina eto dia manodidina ny 180. Ny fitsangatsanganana any Kalametia dia amin'ny maraina indrindra no atao, satria avy eo mafana be. Ny faharetan'ilay fitsangatsanganana dia adiny 2 eo ho eo.
Ny morontsirak'i Tangalle avy eo Kalametia ka hatrany Rekawa dia miavaka amin'ny fisokafan'ny sokatra hametraka atody. Mitranga eo anelanelan'ny aprily sy septambra io. Amin'ity toerana ity dia mandamina fandinihana ny biby mandady amin'ny alina aza izy ireo amin'ny alàlan'ny jiro fandrehitra. Karazam-sokatra maro no tonga eny amoron-dranomasina - mainty sy maintso ary volontany.
Mandeha lakana eny an-tanety
Ao amin'ny laguna, izay manakaiky ny torapasika any Tangalle, dia afaka mandeha sambo ianao. Betsaka ny vondron'olona mipetraka eto, ny bibidia matetika no mandry ao anaty rano ary indraindray koa ny voay, ny vorombola ary ny mpitsikilo izay hita ihany koa. Afaka mandeha fitsangatsanganana sambo ianao saika any amin'ny hotely rehetra amin'ity tanàna ity.
Tangalle, toerana mahafinaritra ho an'ny fialan-tsasatra fialan-tsasatra na asa lavitra!
Torapasika tsy manam-petra .. ranomasina tsara tarehy, biby be dia be .. (chipmunks, mpitsikilo fanala, geckos, foza, sokatra indraindray, gidro, vorona), ireo rehetra ireo dia mampitony ary manaitaitra ny hetsika ati-doha voatrarina. Azonao atao ny mandamina ny fanatanjahan-tena eto mba te hiaina mandrakizay ianao 🙂
Eny, misamboaravoara ny ranomasina eto, fa mbola misy toerana hilomano. Ary tena mafana sy madio ny rano. Ary ny feon'ny onja dia toy izany…. ary tsy misy azo ampitahaina aminy.
Ireo torapasika misy morontsiraka midadasika, nofehin'ny hazo rofia, miaraka amin'ny fasika malemy, malefaka, tsy mamela na iza na iza ho tsy miraharaha.
Mangina sy milentika ny rivotra ao an-tanàna sy ny morontsiraka.
Ny sakafo ao an-trano fisakafoanana eo an-toerana dia tena tsy mahazatra.
Sri Lankans eo an-toerana ... tsara toetra, mivantana, mitsiky.
Ampy tsara ny fotodrafitrasa. Ny hany ilainao dia ao anatin'ny elanelan'ny dia lavitra.
Tsy natao ho an'ny fety ihany ilay toerana, mazava ho azy. Nefa eto ianao afaka mandany iray volana na roa ary hahafantatra ny zava-mahafinaritra rehetra amin'ny fialan-tsasatra tena milamina na miasa amin'ny feon'ny ranomasina.
Hividianana tetika eto amin'ny morontsiraka voalohany, manangana trano mahafinaritra .. ary aorian'izany, azonao antoka fa manana ampahany amin'ity paradisa ity ny fanananao 🙂
Tsy manamarina ity olona voatahy ity aho fa olona tsara tarehy .. satria tsara satria tsy be mpizahatany eto 🙂
Souvenir avy any
Raha liana amin'ny fialan-tsasatra kamo miala sasatra ianao, morontsiraka lao tsy misy farany, dia vahaolana tsara i Tangalle.
Ny vanim-potoana avo any Tangalle amin'ny ririnina dia fotoana mety indrindra ho an'ireo mpandeha avy any amin'ny hemisphere avaratra.
Amporisihiko izy io ho an'ny mpangataka fitsaharana milamina sy milamina.
Ireo mpitia ny fiainana amin'ny alina sy ny tabataba dia tsy misy ifandraisany eto.
Ary mbola lavitra. Tangalle dia malaza amin'ny sakafo matsiro indrindra. Ny trano fisakafoanana sy kafe eto dia manome sakafo matsiro noho ny any amin'ny toerana hafa any Sri Lanka.
Toerana mahafinaritra sy torapasika tsara indrindra any Sri Lanka!
Manantena aho fa saika hatrany Tangalle mihitsy ny làlamby dia tsy nahatonga mpizahatany niditra an-tsokosoko. Satria ny iray amin'ireo manintona an'ity toerana ity dia ny hoe vitsy ny olona ao.
Ary ny sakafo any amin'ny kafe any an-toerana dia tena matsiro sy amin'ny vidiny mirary.